lesson 13 4q19 | Dam Mang
Tag: lesson 13 4q19
ZIRLÂI 13 December 21–27 ISRAEL HNAM HRUAITUTE SABBATH CHUHNÛ December 21 CHHIAR TÛRTE: 1 Lalte 12:1–16; Tirh. 15:7–11; Joh. 11:46– 53; Neh. 4:7–23; Ezra 8:21–23, 31, 32. CHÂNGVAWN: “Tichuan, mipui …
LESSON 13: December 21-27 ISRAEL MAKAITE Sabbath Nitaklam December 21 TUKAALSUNG SIMDING: 1 Kumpi 12: 1- 16; Sawltak. 15: 7- 11; John 11: 46- 53; Nehemiah 4: 7- 23; Ezra …
Leiers in Israel
Les 13 *21 tot 27 Desember Leiers in Israel Sabbatmiddag Leesverwysings vir hierdie week se studie: I Konings 12:1–16; Handelinge 15:7–11; Johannes 11:46–53; Nehemía 4:7–23; Esra 8:21–23, 31, 32. Geheueteks: …
Lesson 13 *December 21–27 Leaders in Israel Sabbath Afternoon Read for This Week’s Study: 1 Kings 12:1–16; Acts 15:7– 11; John 11:46–53; Neh. 4:7–23; Ezra 8:21–23, 31, 32. Memory Text: …
September 27, 2019 October 28, 2019 - by dammang - LeaveaComment
သင်ခန်းစာ (၁၃) ဣသရေလလူမျိုးထဲမှခေါင်းဆောင်များ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ – ၂၇ ဥပုသ်နေ့မွန်းလွဲပိုင်း ဒီဇင်ဘာ ၂၁ ဖတ်ရန်ကျမ်းချက်များ။ ၃ရာ ၁၂း၁-၁၆။ တမန် ၁၅း၇-၁၁။ ယောဟန် ၁၁း၄၆-၅၃။ နေဟမိ ၄း၇-၂၃။ ဧဇရ ၈း၂၁-၂၃၊၃၁၊၃၂။ အလွတ်ကျမ်းချက် ‘လူအပေါင်းတို့သည် ဟောပြောသောစကားများကိုနားလည် သောကြောင့် စားသောက်ခြင်း၊ သူတစ်ပါးတို့အားဝေမျှခြင်း၊ အလွန် ပျော်မွေ့ခြင်းကြိုပအံ့သောငှာသွားကြ၏’ (နေဟမိ …